Mid ka mid ah urruradda soomaalida ee Göteborg oo laga yaabo in loo diro inkasso | Somaliska
Shaqada & Ganacsiga / Somaliska
Urrur soomaali ah oo lugu magacaabo Framtids förening, qeybna ka ahaa mashruuc loogu magac darray “Xarrunta Geela ee Angered” ayaa haatan qarka u saaran in loo dirro inkasso, ka dib markii ay bixin waayeen lacagtii qeybtooda ka soo gaartay mashruucaas ee loogu talagalay in lugu shaqaaleeysiiyo dhalinyarro soomaali ah.
Balse mas’uuliyiintii xarrunta geela ayaa u muuqda kuwo ogolaatay qorshe si tar tariib ah ugu bixineeyso nus malyan lacag ah oo ku maqan kaas oo loogu talagalay mashruuca hirgeli waayey fulintiisa. Marina Johansson oo madax u ah xafiiska arrimaha bulshadda ee maalgelinta ayaa dhinacadeeda aad u soo dhaweeysay qorahaha xarruntaasi ay lacagta dibu ugu soo celineeyso qasnadda dowladda, halka urruruka soomaalida ah aannu haba yaraatee laga heyn wax war ah oo la xirriira dib u celina 90.000 (Sagaashan kun) oo karoon oo ay ku qaateen mashruuca geela, kaas oo ay sheegeen in ay dhalinyarradda soomaalida ah ee dalka ku cusub ah ku howl gelinayaan. Waxaase muuqata in loo dirayo inkasso hadaaneey lacagta ku soo celin muddadii loo qabtay oo ah dabayaqaada bisha agoosto.
Ugu dambeyntii mashruucan geela ayaa kolkii hore qeyb ka mid ah la doonayey in soomaalida Göteborg ee shaqo la’aanta heeyso lugu shaqaaleeysiiyo, hase ahaatee ay guux badan ka dhex dhalisay soomaalida oo u arkay ineey tahay mid lugu ihaaneeynayo islamarkaasina aannu soomaalida oo idil aaneey aheyn xoolo dhaqato. Mashruuxan ayaa sidoo kale noqday mid shaqsiyaadkii hormuudka ahaa ay sheegeen in nus malyan lacag ahi la soo wada celin karin sababo la xirriira iyadoo qaar ka mid ah loo adeegsaday dhismayaasha xarrunta geela iyo shaqaalihii howsha wax ka waday, balse maamulka gobolka ay sheegeen inuu yahay mid fashil ah.
Xubin ka tirsan xisbiga SD oo loo maleeynayo inuu halis ku yahay ammaanka Iswiidhan